Rehefa avy nametraka ny Fedora 19/20 | Avy amin'ny Linux
Salama namana avy amin'ny desdelinux.net.
Efa ela aho no nampiasa ny Fedora niaraka tamin'ny XFCE teo amin'ny PC-biriko sy ny solosaina findainy, nanolo an'i Debian na teo amin'ny solosaina PC na teo amin'ny solosainako ary teo amin'ireo mpizara an'ny orinasa niaraka tamin'i CentOS.
Zava-dehibe ny milaza fa ny fanovana nomena dia noho ny filàna marina ao amin'ny mpizara ary satria tsy maintsy zatra ny fomba fiasa hafa aho (yum, fisie rakitra sns ...) Novako tsara ny PC sy ny solosaina ho an'i Fedora miaraka amin'ny XFCE satria io no latabatra tiako indrindra: D.
Tokony holazaiko fa mandeha tsara ny CentOS sy ny Fedora, ary satria ny fomba fanefena ny CentOS dia efa niresaka tamin'ny iray amin'ny lahatsoratra teo aloha Amin'ity indray mitoraka ity dia hifantoka amin'ny Fedora aho, satria maro no matahotra an'izany na mino fa tsy mora ampiasaina izany.
Ho fanampin'izay, ny Fedora dia iray amin'ireo distro linux vaovao indrindra ka tsy hanananay ny kinova farany amin'ny fonosana rehetra fa tsy toy ny distro famoahana horonantsary ireo fonosana ireo dia notsapaina tsara mba tsy hanana ahiahy rehefa manavao ny zava-nitranga mihoatra ny iray amin'ny distros mihodina ..
Sary vitsivitsy an'ny Fedora miaraka amin'i XFCE:
Raha tsy misy resaka intsony, andao tonga any:
Sintomy ny Fedora amin'ny XFCE:
Sintomy ary apetaho ny tahiry RPMFusion:
Izy io dia apetraka amin'ny tsindry roa sosona amin'ny alàlan'ny fampidirana ny teny miafina superuser ary manaiky ny zava-drehetra.
Ankehitriny ny dingana manaraka rehetra dia tsy maintsy atao ho fakan'ny rafitra. Raha hanao an'ity dia sokafy ny terminal ary manorata:
(ampidiro ny tenimiafinao superuser)
Hanavao ny rafitra:
(Izy io dia mpanjifa mailaka, mpizaha tranonkala ary tonian-dahatsoratra tsy ilaina satria hametraka Firefox, Thunderbird ary Libreoffice izahay)
Fandaharana tena ilaina hapetraka:
Fandaharam-potoana hamitana (tsy voatery):
Alefaso ny ssh (tsy voatery):
systemctl start sshd (Manomboka ny serivisy)
systemctl enable sshd (Mampandeha ny serivisy manomboka amin'ny fanombohana ny rafitra)
Ovao ny anaran'ny mpampiantrano sy mpampiantrano ny rafitra (tsy voatery):
soloinay izay miseho amintsika amin'ny anarana tiantsika hananan'ny rafitra (raha izaho peter-xfce) ary miangona amin'ny CTRL + O izahay ary manidy amin'ny CTRL + X
avelantsika eto toy izao:
raha ny amiko:
Mitahiry amin'ny Ctrl + O ary mifarana amin'ny Ctrl + x
Ary voila .. Miaraka amin'izany dia manana Fedora voaomana amin'ny fampiasana mihoatra ny ankapobeny izy ireo ary efa hitan'izy ireo fa tsy sarotra velively izany: D.
Aza adino ny manome hevitra 😀
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Rehefa avy nametraka ny Fedora 19/20
Te-hametraka Fedora foana aho, fa rehefa nametraka GRUB dia nanome ahy tahotra kernel. Ary na dia napetrako tamin'ny live aza ny loader dia tsy azoko natao mihitsy ny niasa. Hiatrika ny Fedora 20 aho.
Ho an'ny fitiavan'i Dior, Ubuntu? TPT.
Hafahafa ny tranga misy anao .. Izaho no hany tahotra kernel hitako tao amin'ny linux dia avy tamin'ny Ubuntu. Aza mijanona amin'ny Debian, CentOS, Fedora, Slackware, Arch ary openSUSE 🙂
ny marina dia ny Fedora 18 tamin'ny volana voalohany dia nanome tahotra kernel mampatahotra ... 17 dia mitovy ary ny Fedora 19 dia mitovy, toy ny landy.
Inona ny marika mainboard anananao? Raha tsy manohana ny PAE ny motherboard sy / na ny mpikirakira anao dia mila mividy iray hafa izay (amin'ny ankapobeny dia tokony hanohana azy ny ankamaroany).
Solosaina findainy 2010 izy io ary manohana pae.
Subsystem: Fitaovana Samsung Electronics Co Ltd c581
Sainam-pirenena: tompon'ny bus, devselera haingana, latency 0
00: 01.0 tetezana PCI: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 02) (prog-raha 00 [decode mahazatra])
Bus: primér = 00, faharoa = 02, subordinate = 02, sec-latency = 0
I / O ao ambadiky ny tetezana: 00002000-00002fff
Fahatsiarovana ao ambadiky ny tetezana: dc000000-ddefffff
Fahatsiarovana mialoha ao ambadiky ny tetezana: 00000000de000000-00000000effffff
Mpamily kernel ampiasaina: pcieport
Modely kernel: shpchp
Sainam-pirenena: master bus, devsel haingana, latency 0, IRQ 43
Fahatsiarovana ao amin'ny fc805800 (64-bit, tsy voafaritra mialoha) [size = 16]
Mpamily kernel ampiasaina: mei
Modely kernel: mei
ahoana ny fandehan'ny xfce amin'ny compiz? Faly aho fa misy vokany lemaka io ary mihena sy be indrindra. ireo daholo ny effets ampiasako ao amin'ny Fedora kde.
Ny Compiz dia miasa tsara toa azy :) .. Mora dia mora ny mametraka azy amin'ny yum install compiz
Tuto tena tsara. Inona koa, heveriko fa mendrika ny hankafizana ny CentOS araka ny tokony ho izy, saingy fitoniana maro no mahafoy tena ho an'ny farany.
PS: Mampiasa an'i Debian aho satria farafaharatsiny mba mahazo fanampiana ianao na dia any amin'ny toerana lavitra indrindra an'i Cuba aza.
Racca Alemanina dia hoy izy:
Mazava ho azy, toy ny tany Fedora tsy nanampy olona izahay. Mampihomehy ahy ianao !! 🙂
Valiny tamin'i Germán Racca
Manaiky aho .. be dia be ny fanampiana amin'ny Internet 😀
Raha ny fahalalako azy dia tsy manampy ny kiobanina sy ireo avy amin'ny firenen-kafa aloakan'i Etazonia. Ary koa, tsy misy ilana azy ny fanohanana centos, omena ny fanampiana ny satroka mena
Salama, heveriko fa ny fanohanana ny fandoavam-bola an'ny RHEL, fa ny CentOS kosa dia tohana .. Mivoaka ny fanavaozana, ianao wiki ary fampahalalana marobe amin'ny internet, izay andoavanao vola raha RHEL ianao .. Izany no mahatonga ny mpampiasa maro mankany amin'ny CentOS izay manome fanampiana ny fiarahamonina. Toy izany koa no mitranga any Fedora ... ny fanohanana dia ny fiarahamonina fa tsy foiben'ny Red Hat: D.
Manome fanamby anao aho hanome porofo ahy, iray monja, fa tsy manampy ny olona avy amin'ireo firenena lazainao i Fedora! Heveriko fa mamerina toy ny boloky ianao, tsy fantatrao ny momba ny zavatra, ary tsy miaina izany. Mihobia!
Satria tsy mivoaka ny hevitr'i eliotime3000 dia apetrako eto
miaraka amin'ny bonus tafiditra
Efa ela no nivoaka ny hevitro, saingy tsy hitanao tsara izany satria nampiasa ny marika href ho an'ireo rohy aho.
Tsy mbola nekena ny hevitra nataonao rehefa nanao an'io aho.
Ity ny anao valiny miaraka amin'ny bonus tafiditra.
Hahaha… tongava aty amiko fotsiny amin'izany? Io no nolazaiko, miverimberina toy ny boloky izy ireo nefa tsy mahalala zavatra. Tiako ianao milaza amiko ny zavatra niainanao manokana, fa tsy hamerina ireo lainga navoakan'ny hafa any. Fantatro tsara hoe iza no namoaka an'io, ary raisiko ho avy amin'iza io, zavatra diso sy diso tanteraka. Amin'ny fanajana rehetra, noheveriko ho hendry kokoa ianareo, saingy hey, toy izany ny olona manavakavaka. Famihina ho anao roa! 🙂
Ao amin'ny fifanarahana fahazoan-dàlana milaza fa ny olona ao amin'ny fantsona irc dia afaka mandà tsy hanome anao fanampiana raha avy amin'ny firenena nalain'ny USA ianao. Ilaina ny mijery izay lazain'ny American Fed.
ny mpankafy debian dia hoy izy:
Che, karakarainy voalohany amin'ny navos izy ireo ary avy eo alefan'ny Alemanina izy ireo, zavatra iray:
Ary ho an'i Fedora rehetra: tsy misy papa exiti !! Stamina debian, hadalana ary fientanam-po !!
PS: Henoy izay hiran'ny mpankafy: "Red-beta beta-tester" "Ny tanànanao dia toa firenena tsy miankina" "Debian town, Debian town"
Valio ny mpankafy debian
Ao amin'ny wiki Fedora no misy azy milaza fa ny RH dia tsy afaka manohana ireo firenena voahodinkodina fa tsy Fedora. Na izany na tsy izany, manasa anao aho hijerenao ny tenanao. Tsy manome valiny ho an'ny mpankafy anao aho, fa milaza aminao aho fa misy ny zava-misy raha ny tena izy. Manohana ny GNU / Linux aho ary noho izany ny distros sy rindrambaiko maimaimpoana rehetra. Saingy mba hiasa ity tontolontsika ity dia tokony ho marim-pototra sy marina isika. Raha haneho hevitra isika, tsy olana ny milaza izay lazain'ny olona ao amin'ny bilaogy iray any. Fifamihinana!!
@ ilay mpankafy debian:
Voalohany, tsy nanaja olona aho, na nanandrana "mamily" olona. Manana dinika mahasalama miaraka amin'ireto tovolahy ireto aho.
Faharoa, fantatro hoe iza ianao.
Fahatelo, tiako ny GNU / Linux, na i Debian, na Fedora, sns.
Ho an'izay te hiaina ny farany nefa tsy voatery hijanona eo amin'ny hareza (jereo ny Arch) dia tsara ihany i Fedora. Fa raha mila fitoniana 100% ianao dia tsara kokoa ny RHEL / CentOS.
Jerevo aho rehefa mampiasa Debian stable, andrana, CentOS ary Fedora azoko lazaina aminao fa matanjaka kokoa ny Fedora noho ny fitsapana an'i Debian izay havaozina kokoa ..
Io no distro tonga lafatra raha mitady fanavaozana ny fonosana rehetra ianao nefa tsy mahatratra ny fihoaran'ny distros mihodina miaraka amin'ireo fihenany :) ..
Eny, efa niainako ratsy tamin'ny fonosana .rpm, noho izany aho dia manana fahasamihafana kely amin'ny distros sasany izay toa sahala amin'i Fedora. Angamba hamporisihina aho hanandrana ny Fedora, saingy hampiasa ny FedoraRussian aho mba hahazoany fanohanana feno kokoa (Skype, codecs,…).
Ary eo an-dàlana, Slackware no distro izay nahagaga ahy indrindra tamin'ny kalitaon'ny fitoniana sy ny fikirakirana an'io (hafahafa ihany, Slackware dia mifanandrify amin'i Fedora sy ny toa azy, na dia tsy havaozina matetika aza izy io).
Ity Fedora tena tsara ity, ilay tiako indrindra dia ny miaraka amin'i kde. Tamin'ny gnome3 dia tsy dia tiako loatra. Miaraka amin'i Mate sy compiz dia tsikaritro fa somary tsy milamina izy io, miaraka amin'ny xfce dia mila manandrana tsara aho.
Tsara raha nanao sary an-tsary toa ny mint, ubuntu ary openuse izy ireo, heveriko fa niboridana ny xfce tamin'ny fotoana farany nametrahako azy. XD Ary tsy tiako ny manaingo ny tenako, tsy hoe malaina aho fa satria tsy tiako ny zavatra noforoniko. Toy ny artista XD rehetra haha
Tsy nilaza akory i Fedora tao amin'ny eula fa tsy hanohana anao izy io. Ny lazainy aminao dia mety tsy homeny anao izany .. Sintinao tsy misy olana, apetrakao ary ampidininao ny fanavaozana toy ny olona rehetra manerantany .. Toy izany koa no mitranga ao amin'ny CentOS, Debian ary izay distro rehetra.
Gee @ eliotime3000, minoa ahy rehefa milaza aminao aho fa mipetraka amin'ny faritra lavitra any Kiobà aho, ary jereo, manao an'i Fedora aho. Marina fa any amin'ny toerana hafa dia milaza izy ireo fa tsy afaka manome ahy fanohanana X na Y antony tsy misy ifandraisany izy ireo, saingy tsy manakana ahy tsy hampiasa an'ity distro mahafinaritra ity.
Faly be aho fa mampiasa ny Fedora ianao ary tsy ho voatarika amin'ny fanehoan-kevitry ny olona tsy mahalala izay lazainy ary miteny noho ny fitsarana an-tendrony fotsiny. Raha mila fanampiana ianao dia azonao atao ny mahita ahy amin'ny IRC (skytux) ary raha fantatro dia hanampy anao aho. Toy izany koa amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny fantsona IRC, tsy hisy handà anao na inona na inona. Raha tsy hoe, mazava ho azy, tsy misy izy ireo noho ny antony manokana sy / na asa. Fifamihinana!! 🙂
Toy izany koa eto: D. Na iza na iza afaka mangataka fanampiana amiko amin'ny mailako: petercheco@hotmail.es
@petercheco: tsara raha miditra amin'ny fantsona Fedora ao amin'ny IRC ianao 🙂
Sooooo post tsara… .. ary manao ahoana ny fanalefahana endritsoratra ao amin'ny Fedora?
Fa maninona no: D. Mila manana karazana fanasana ianao na afaka misoratra anarana mivantana. Tiako ny rohy iray. Misaotra 😀
Ny fonosana malefaka dia tena tsara .. Andramo fotsiny ny livecd dia ho hitanao 😀
Mametraha client IRC (I fahazoan-dàlana ho XChat) ary ampidiro ny mpizara freenode, izay misy ny fantsakan'ny Fedora.
Ny fantsona amin'ny teny Espaniôla izay atolotro dia: # fedora-latam sy # project-fedora.
Raha mila fanazavana fanampiny: https://fedoraproject.org/wiki/How_to_use_IRC.
Misaotra betsaka! izany no mahatonga ny distro, ny fiarahamoniny, ho lehibe, fa tsy izay ao ambadika ara-dalàna. Toy izany koa no lazaiko, amin'ny fomba rehetra tokony hanampiako azy ireo, satria afaka mahita ahy saika isan'andro izy ireo http://gutl.jovenclub.cu .
Kudos !! @German sy @petercheco.
Manana olana aho, amin'ny audio, izay misy distro rehetra dia misy fifehezana volume roa.
Raha mampiasa ny mpandahateny aho dia manana volume% ary raha apetrako ny headphone dia misy% volume hafa, izay raha esoriko ny headphones dia miverina amin'ny% an'ny mpandahateny izany.
Mametraka ny Fedora plus xfce aho
Etsy ambony avelao ireo rohy ho an'i Fedora miaraka amin'ny XFCE ary mametaka ny tena izy :).
Izany no nitranga tamiko tamin'ny Windows Vista / 7/8, amin'ny Linux dia mbola tsy nitranga tamiko izany.
Namaha izany tao amin'ny Arch aho ary tokony samy nametraka alsa sy pulseaudio izy ireo, fa tamin'ny Fedora dia tsy afaka aho.
Tsia, tiako ny Fedora, ao anatin'ny fametrahana tsy latsaky ny 30 min, efa 99% no miasa 😀
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho. Ao amin'ny Windows NT 6.X, misy io olana voatahy io amin'ny fotoana sasany nametrahanao azy tamin'ny rakitsary Realtek (ilay iray tonga tampoka ao amin'ny PC maro).
Ao amin'ny Fedora miaraka amin'ny XFCE dia iray ihany ny fifehezana .. Na ho an'ny mpandahateny na ny headphone.
Ny tiako hananana dia ny fanaraha-maso 2.
Mametraka 32 bits amin'ilay rohy iso ianao mandritra ny 64 bits.
Tsy ho afaka hametraka ny plugin-flash ianao raha tsy hoe avelanao hanana ny Adobe repo.
Misaotra, nanadino aho 🙂
Tsy vitako ny manitsy ny lahatsoratra ka navelako tao amin'ny fanehoan-kevitra ireo Adobe repos ary raha ny bokotra rohy Fedora 64 bit, manantena aho fa homen'ny superuser anarana io.
Raha te hametraka Flash dia mila apetrakao ny Adobe repository:
hametraka ianao http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm -y
hametraka ianao http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm -y
Avy eo dia ho hitanao ao amin'ny repos ny fonosana flash-plugin
Ao amin'ny Debian, ianao dia mametraka fonosana iray izay manome anao script raha vantany vao vita ny fametrahana azy, mihazakazaka ary misintona ny Flash Player Tarball ary manamboatra azy irery mifototra amin'ny maritrano izay anananao fotsiny tamin'ny fanaovana an'io baiko io (ny fananana ny sampana contrib mavitrika tsy maimaim-poana, mazava ho azy):
Ary raha misy te-hanavao azy dia atao izao:
Eny, fa tsy maintsy apetrakao amin'ny fomba mitovy ihany ireo repo (ampio contrib tsy andoavam-bola). Manampy ny repo ao amin'ny Fedora rehefa mivoaka ny kinova vaovao dia havaozina miaraka amin'ny baiko fanavaozana ny Fedora: fanavaozana ny yum
Ah tsara. Ny retouching dia vita indray mandeha ihany, ary ny fanavaozana dia amin'ny script. Ary ny plugin Flash dia alaina mivantana avy amin'ny Adobe.
Nampiasako ny Fedora nandritra ny fotoana ela niaraka tamin'ny KDE, saingy tsy haiko ny antony miaraka amin'ny Fedora 19 aorian'ny fampiasana herinandro vitsivitsy dia lasa matevina ny milina ary mihemotra, ankehitriny dia miaraka amin'i Xfce manjaro aho ary mandeha tsara izany, mikasa ny hiova aho ny kapila, satria heveriko fa mivoaka ny tantara ary hametraka an'i Fedora miaraka amin'i Xfce aho, fa i Kwin kosa dia mpitantana varavarankely izay toa tsara (ka manana azy ao amin'ny manjaro aho) ny zavatra tokana tsy ho tadidiko dia ny hoe afaka mihazakazaka dockbarx ao amin'ny Fedora ka feno izany.
Azavaiko fa ilay milina dia I5 2410M miaraka amin'ny ram 4gb ary Intel 4500Hd miharo
Ralehilahy, ny azy dia ny hampiseho ny fomba fanaovana azy amin'ny fitaovana grafika, raha tsy izay eritreretin'ny olona iray dia ny hoe Fedora dia distro xD sarotra tokoa.
Zavatra tsy voalaza firy momba an'i Fedora ary toa heveriko ho antony lehibe manohana azy dia io no distro tokana azontsika heverina ho "tsara" izay manana netinstall mendrika. Midika i Decent fa afaka mifandray amin'ny Wi-Fi izy ary mamela anao hametraka programa marobe. Manoro hevitra tanteraka ny fametrahana amin'ny alàlan'ny netinstall aho. Mametraka programa marobe izay tsy tonga ao amin'ny livecd ianao ary mamonjy ny fanavaozana mega manaraka.
Zavatra iray hafa anolorako tena ny fametrahana ireo tahiry russianfedora maimaimpoana sy tsy andoavam-bola. Misy fonosana toa ny Chromium, Flash, Sun Java, Opera, sns. Tena tsara. Tena vatosoa miafina:
Na dia misy aza ny fanavaozana mega aorian'ny fametrahana azy ireo dia tsy misy antony noho ireo fonosana delta .. Jereo ireo fanavaozana avy amin'i Debian, Arch, Ubuntu sns ...
Ho ela velona i Fedora sy CentOS 😀
Nampiasako Fedora amin'ny solosaiko findainy , ary lasa nandeha tsara ny zava-drehetra, haingana, milamina ary misy hatrany ny fanavaozana ireo programa samihafa.
Indray mandeha ihany aho no nanana olana tamin'ny fikorontanan'ny kernel dia tsy tadidiko izay kinova raha 17 na 18, fa rehefa avy nanadihady sy nanamboatra ny grub dia namaha azy aho (ny pitsopitsony dia hoe niaraka tamin'ny mint sy Windows aho).
Raha ny marina dia miandry ny kinova 20 hivoaka hametraka azy io indray aho.
Fanontaniana iray, mba misy mahay mametraka dockbarx ve? satria nahita zavatra sasany tamin'ny Internet aho, saingy tsy afaka mametraka azy aho ary dock tena tsara.
Misaotra tompoko !!, saingy nanandrana an'io aho ary tsy nametraka azy io, vao mainka manome anao quilombo fiankinan-doha haha
Tena tsara distro ary mandeha tsara miaraka amin'ny akorandriaka Gnome.
Vao avy nametraka azy io aho androany maraina nanandramana ny mpampiasa mpampiasa
rubenset dia hoy izy:
Hiezaka ny Fedora 20 64bit amin'ny solosaina birao aho, hitako fa safidy tsara amin'ny ubuntu sy ny toy izany izy.
Mamaly amin'ny rubenset
Misaotra betsaka, nanampy ahy be dia be
Namana tsy mandanjalanja, misaotra!
Mamorona fampiharana Vala + Gtk3. [Fizarana 1]
Manana olana amin'ny DNS izahay tato anatin'ny andro vitsivitsy